A ije site na nkeji iri na ise Latin, na Paris | Akụkọ Njem
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke Paris bụ Nkeji Latin, n'aka ekpe nke Seine, na ise gbue ikpere n'ala site n'isi obodo French. Ọ bụ na Latin Quarter na La Sorbonne bụ, dịka ọmụmaatụ, n'etiti ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ọzọ, saịtị dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị.
Cafes, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, ndị njem nleta, ụmụ akwụkwọ, ubi, ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ ahịa, nke a district bụ ibu-ewu ewu otú a njem gaa paris O zughi oke na enweghị ije site na Latin Quarter.
1 Nkeji Latin
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na nkeji iri na ise Latin
Ebee ka aha ahụ si? Site na Middle Ages, mgbe ụmụ akwụkwọ Sorbonne bi agbataobi na mmọ ẹkesida usem Latin ẹkpep n̄kpọ. Ihe na-eme ka ọ dị ugbu a, na saịtị ahụ juputara na ụmụ akwụkwọ. Na narị afọ nke 68 na nke XNUMX, otu ụmụ akwụkwọ a haziri usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị kachasị mkpa n'oge ahụ, dịka ọmụmaatụ, May 'XNUMX a ma ama.
Ya mere, ihe kachasị mma ịme tupu ịmalite ịgagharị ebe a bụ ịgụ ntakịrị banyere akụkọ ihe mere eme nke Latin Quarter. Iji nweta uru, ghọta ma nwee anya ọzọ. Ọnụ ụzọ dị n'ihu bụkarị Ebe de Saint Michel, ya na isi iyi ya na dragon ahụ. Na-agafe ụlọ ngosi okporo ụzọ na-emepe ebe enwere ụlọ oriri na ọ cafụ andụ na ụlọ ahịa, ụfọdụ nwere mbara ala, ọ bụ ezie n'okporo ámá bụ isi na nke kachasị ewu ewu bụ Rue Huchette.
Kedu ihe ị ga-ahụ na nkeji iri na ise Latin
El Unlọ ihe nkiri Cluny Ọ bụ obere ihe ngosi nka nke nwere akụ sitere na Middle Ages. Ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ ochie nke ndị abb nke Cluny na ebe a ị ga-ahụ isii ụwa ama ama nke a maara dị ka The Lady na Unicorn. Yi, ejiri mee, nke nwere ihe karịrị narị afọ ise nke ịdị adị.
Na mgbakwunye na akụ ndị a, ebe ahụ nwere ubi ndị mara mma ị ga-agagharị na nwa oge. N'ezie, n'oge ọ na-emechi. Ọ bụ n'okpuru ntaghari ohuru na ikpeazụ September 29 ọ na-emechi ụzọ ya ruo mgbe 2022. Ọzọ na-akpali ma na-ewu ewu na saịtị bụ Shakespeare na ụlọ ahịa ụlọ ahịa, nke ụlọ ahịa mbụ ya na Paris mepere na 1919.
Lọ a malitere na mmalite narị afọ nke iri na asaa, mgbe ọ bụ ebe obibi ndị mọnk, mana ụlọ ahịa akwụkwọ sitere na 50s. Storelọ ahịa ahụ nwere arịa dị iche iche, piano, prọpi typewriter na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịzụta akwụkwọ, a ga-eji akara ngosi ụlọ ahịa ahụ zọọ ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ nso ị nwere ike ịnwe kọfị na kọfị dị n'akụkụ nke ọzọ, na-ele Seine anya.
Pantheon Ọ dịkwa na Latin Quarter. Ọ bụbu ụka nke nwere nnukwu dome mana taa ọ bụ nke ụwa ma na-asọpụrụ ndị dike nke France. Ebe a ka e liri Voltaire, Victor Hugo, ndị di na nwunye Curie na Antoine de Saint-Exupery na Louis Braille. Waslọ ahụ nyere iwu ka Louis XV wuo ya ka ọ bụrụ ụka mgbe ọ gbakechara site na ọrịa wee si na 1791 jiri Gothic na ikuku oge gboo.
Wo dometɔ akpa gãtɔ nye xexeame ande akpa aɖe Foucault akwụkwọ (You gụrụ akwụkwọ homonic nke Umberto Eco?). Ihe pendulum bu nnwale nke Foucault iji gosi na uwa n’aghari.
N'aka nke ọzọ, na njedebe nke Latin Quarter bụ Ogige Luxembourg, karịsịa na-ejupụta na ngwụsị izu. Enwere ọtụtụ osisi, ụzọ ụkwụ, ndị mmadụ na-ekwu okwu ma ọ bụ na-eme mmega ahụ. Gburugburu ọdọ mmiri dị n'etiti etiti nwere oche ịnọdụ ala, ihe a na-ahụkarị.
Obi nke ubi a bu ulo eze. Ugbo ụbọchị site na 1612 ma Princess Marie de Medici, bụ Queen of France na-eme akụkụ ya. Taa, obí eze ahụ na-arụ ọrụ dị ka Senate nke France. Ugbo ndị ahụ zoo karịa ihe osise 100 na ọbụna a Obere okike nke ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe nke enyere France na United States. Enwekwara ọmarịcha Medici mara mma ma dịkwa jụụ.
Ubi ọzọ mara mma bụ Ubi Osisi, ogige botanical nwere ihe karịrị osisi 4500 dị iche iche: ogige rose, ogige alpine na ogige mkpụrụ osisi Art Deco. Enwekwara nnukwu ụlọ akwụkwọ ọta akara atọ dị na narị afọ nke iri na itoolu, ọmarịcha ọla na iko. Admission bụ n'efu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe Ogige na Natural History MuseumEkwesịrị m ịkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ. N’ụlọ ngosi ihe mgbe ochie a nwere ebe a na - edobe anya maka mineral, onye ọzọ maka evolushọn na nke ọzọ na paleontology.
Ọzọ na-akpali ihe ngosi nka bu Museumlọ ihe nkiri Curie. Ọ na-arụ ọrụ ebe ya onwe ya na-arụ ọrụ ma na-amụ redioactivity na àmụmà. Marie Curie, ọ kwesịrị ka echeta, bụ nwanyị mbụ meriri Nobel wee bụrụ prọfesọ na Sorbonne. Nke a bụ ngwa sayensị oge ochie na obere ogige mara mma. Saịtị ahụ mepere Wednesday ruo Saturday site na 1 ruo 5 elekere.
Na usoro nke Churcheska Latin Quarter e nwere anọ na-achị odida obodo: Saint-Etienne, senti-Severin, Saint Julien le Pauvre na Saint Mèdard. Ihe niile mara mma.
Mgbe anyị jere ije ma ọ bụ n'oge ma ọ bụ na ngwụcha, kafe French na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-arata anyị mgbe niile ka anyị were ezumike ma rie ma drinkụọ ihe ọ bụla. Na Ogige Sorbonne e nwere Les patios, ebe a na-ere nri mara mma. Doorzọ na-esote bụ Tabac De La Sorbonne, dị mma maka nri ụtụtụ dị ụtọ Croissants.
N'ezie, enwere ọtụtụ saịtị ma echere m na ọ bụ gị ka ịchọpụta ọkacha mmasị gị. Enwere ọtụtụ na ihe kachasị mma bụ ịhapụ onwe gị, kpafuo ma kwụsị ihe na-adọrọ uche gị.
The Latin Quarter nwere ọmarịcha n'okporo ámá, obere n'ámá, ụlọ akụkọ ihe mere eme, ihe akpụrụ akpụ na mbadamba nkume ndị ị nwere ike ịmasị ịgụ, ụlọ ahịa nke ụdị dị iche iche. Foto nke Nche na-eche nche Enweghị m ike ịhapụ ya, ma. Ọ na-azụ ahịa kemgbe 1370 ma bụrụ nnukwu injinia. Ma ọ bụ ije ije n'ime Telọ Nsọ Sainte. Ọtụtụ afọ gara aga mgbe m gara, ọ bụ na mweghachi na ọ bụ ka a mara mma. Ihe ndị ahụ tụrụ na windo ndị ahụ dị mma na nkọwa…. Oo chimoo!
Ọ bụrụ na ịgbazite ụlọ na kichin, mgbe ahụ, ịgagharị ọfụma nwere ike ịbụ ịgbaso nzọụkwụ Julia Child, nwunye onye nnọchi anya mba America nke dere akwụkwọ nri nri na 50. Ihe nkiri a bụ Meryl Streep ma kpọọ ya Julie na Julika. Ọ na-azụ ahịa na Rue Mouffetard ahịa. Thelọ ndị ahụ mepere n'elekere itoolu nke ụtụtụ, na-emechi etiti ehihie ma meghee n'ehihie.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị Omenala Alakụba, n'ihi na na Paris ọ dịkwa ugbu a na agbata obi ya na-anọchi anya ya na Nnukwu ụlọ alakụba nke Paris, nke kasị ukwuu n'obodo ahụ, tọrọ ntọala na 1926.
O doro anya na ubi ya mara mma ma nwee ụlọ oriri na ọ teaụ teaụ na ụlọ tea nke ukwuu. Yana otu ahịrị Arab World Institute, nke na-enyocha onyinye onyinye sayensị na ọdịbendị nke Arab. Lọ ahụ bụ usoro ọhụụ nke Jean Nouvel mere site na njedebe 80s nke narị afọ nke XNUMX. Oghere ya na-emechi ma na-emeghe dị ka ìhè anyanwụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Quarter Latin na Paris nwere ntakịrị ihe niile ọ gaghị emechu gị ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » A ije site na Latin Quarter, na Paris